निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’ परिवर्तनको तयारीमा गृह प्रशासन: स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, हतार नगरौ ! - नेपालबहस
निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’ परिवर्तनको तयारीमा गृह प्रशासन: स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, हतार नगरौ !
| ६:२८:०९ मा प्रकाशित
२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आउँदो असार पहिलो साताबाट ‍निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यका साथै खेतीपातीको समय भएको भन्दै सरकारले जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लकडाउन परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
निषेधाज्ञा तत्काल नहटाइने तर मोडालिटीमा परिवर्तन गर्दै जनजीवन सहज बनाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो जिल्लाकाे अवस्था हेरेर यसबारे आवश्यक निर्णय लिन सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकिएको गृहप्रशासनले जनाएको छ । गृहमन्त्रालयको निर्देशनसँगै जिल्लास्थित डीसीएमसीले जिल्लाको अवस्था विश्लेषणमा लागेका छन् ।
नयाँ मोडालिटी अनुसार अब निर्माण, उत्पादनजन्य, कृषि कार्य क्षेत्र खुला गर्ने सरकारको तयारी छ । खाध्न पसलमा लगाउँदै आएको समय सीमा पनि हटाउन लागिएको छ । तर, विद्यालय, कलेज, होटल व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सपिङ मलसहितका भीडभाड हुने क्षेत्र भने तत्काल खुल्ने छैनन् ।
यसैगरी, सामूहिक उपस्थिति हुने तथा बढी भीडभाड हुने विवाह, व्रतबन्ध, सभा, गोष्ठी गर्न अझै केही समय रोक लगाइनेछ । सार्वजनिक यातायात भने केही समय बन्द नै गर्ने सरकारको योजना छ । तर, अवस्था हेरेर निजी सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी सरकारले गरेको छ ।
तर यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने खोप नलाएसम्म जनजीवनलाई पुरानै शेलीमा फकाउँदा थप जोखिम बढने भन्दै निषेधाज्ञा खुकुलो गराउन हतार गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । बर्षायामको समयमा हुने बाढी पहिरो विपतको समस्या आउने सक्ने त्यसले कोरोनाको जोखिमा झनै बढाउन सक्ने त्यसतर्फ समयमै योजना बनाउन र सचेत हुन मन्त्रालयले गृहप्रशासनलाई सुझाव दिएको हाे ।
अहिले पनि दैनिक परीक्षणको ३० प्रतिशत हाराहारीमा संक्रमण देखिएकाले लकडाउन खुकुलो बनाउँदा संक्रमण बढन सक्ने आशंका मन्त्रालयले गरेको छ ।
गत बैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा लगाउदै आएको छ । ७७ जिल्लामध्ये हाल ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि ९ मिनेट पहिले
सरकारी एम्बुलेन्स प्रयोगबिहीन हुँदा बिरामी मर्कामा ४१ मिनेट पहिले
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले अवितरित हकप्रद लिलामी ल्याउँदै ४३ मिनेट पहिले
मलाई त तै सुवा मन पडी बजारमा सार्वजनिक ५६ मिनेट पहिले
तोकिए ८ होटल क्वारेटाइन २ महिना पहिले
गैँडा गणनाको नतिजा शनिबार सार्वजनिक गरिने २ महिना पहिले
घरमा सुरक्षित साथ बसेर तीज मनाउन प्रशासनकाे आग्रह १० महिना पहिले
भित्र सम्बन्धनका लागि आयोगको बैठक, बाहिर नागरिक अगुवामाथि धरपकड १ हप्ता पहिले